Singapore education service in myanmar, Singapore medical service in myanmar | CareForever Services | BCA Academy (စင်္ကာပူအစိုးရကျောင်း)၏ အားသာချက်များ နှင့် 2015 April Intake အတွက် Registration များကို လက်ခံခြင်း
အဆောက်အဦး သတင်း အချက် အလက်ပိုင်း ဆိုင်ရာ နည်းပညာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း (DDE)
ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း(DCE)
အဆောက်အအုံ၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာတွက်ချက်သည့် အင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာသင်တန်း (DQS)
Exam & Seminar
Diploma in Construction Engineering
Diploma in Digital Engineering
BCA Academy (စင်္ကာပူအစိုးရကျောင်း)၏ အားသာချက်များ နှင့် 2015 April Intake အတွက် Registration များကို လက်ခံခြင်း
BCA Academy Engineering school ဝင်ခွင့် 2015 April Intake အတွက် Registration များကို လက်ခံနေပါပြီ။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် Care Forever Services မှ ရက်တိုသင်တန်းများကို ကျွမ်းကျင် ဆရာမများနှင့် စနစ်တကျ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း စာမေးပွဲအတွက် အတွေ့အကြုံရရှိပြီးသားဖြစ်စေရန် Per Test Exam များကို ပြုလုပ်ပေးချင်းများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပြည့်ပြည့်၀၀ ပေးနေပါသည်။ Exam Date မှာ September 21 ဖြစ်ပါသည်။ Exam ရက်နီးကပ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် BCA Engineering School (စင်္ကာပူအစိုးရကျောင်း)ကို စိတ်ပါဝင်စား တက်ရောက်လိုသူများ နောက်မကျရလေအောင် မြန်မြန် Registration ပြုလုပ်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
ယခု BCA Academy (စင်္ကာပူအစိုးရကျောင်း)၏ အားသာချက်များကိုပြောပြပါရစေ။
BCA Academy သည် Green Building Technology နှင့်ဆက်စပ်နေခြင်း။
ဘာသာရပ်အားလုံးသည် BIM နှင့် ပတ်သတ်သော အသိပညာ ဗဟုသုတများနှင့် နည်းပညာများကို သင်ကြားပေးခြင်း
2015 ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်ရှိသော အဆောက်အဦး၏ 80% ကို Building Information Modelling နည်းစနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် BIM နှင့်ပတ်သတ်သော ဘွဲ့ရရှိထားသူများမှာ လက်တွေ့ ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ခြင်း။
BCA သည် Diploma ဘွဲ့အပြင် ၎င်းမေဂျာနှင့် ပတ်သတ်သော အခြား Certificate များပါ ထပ်မံရရှိခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းခွင် တွင်များစွာ အထောက်အကူပြုခြင်း။
BCA Academy သည် စာတွေ့အပြင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရခြင်းကြောင့် မိမိလုပ်ငန်းခွင်တွင် အထောက်အကူပြုခြင်း။
Diploma ရရှိပြီး Degree ကိုထပ်မံတက်ရောက်လိုပါက ထူးချွန်သူများ၊ အမှတ်ကောင်းသူများသည် NTU နှင့် Australia ရှိတက္ကသိုလ်များသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း။
*** BCA Academy မှရရှိသော Diploma လက်မှတ်သည် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Polytechnics များနှင့် Australia မှရရှိသော Diploma လက်မှတ်နှင့်ညီမျှပြီး UK Degree ၏ ပထမနှစ် နှင့်တန်းတူဖြစ်ကြောင်း National Recognition Information Centre (NARIC)မှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို www.bcaa.edu.sg/naric.aspx တွင် လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အဆောက်အဦးသတင်းအချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာဒီပလိုမာသင်တန်း (DDE)
Latest News for BCA
BCA Academy ၏ Foundation Programme ကို မြန်မာပြည်တွင် တက်ရောက်နိုင်ပြီ
2018 April Intake အတွက် နောက်ဆုံး အခွင့်အရေး
Address : A1, Room-306, 3rd Floor, Aung Chan Thar Condo, 13th Ward, Aung Chan Thar Street, Yankin Township, Yangon, Myanmar.
Tel : 09-5166240, 09-799595011, 09 45 138 3801
Copyright © Care Forever Services. All rights reserved. Developed by MWP ( myanmar web professional ).